अध्यक्षद्वयका निर्देशनभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गरेका छौं : मुख्यमन्त्री शाही (अन्तर्वार्ता)- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अध्यक्षद्वयका निर्देशनभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गरेका छौं : मुख्यमन्त्री शाही (अन्तर्वार्ता)
'अहिले संसदीय दलले अविश्‍वास प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । अहिलेको यो विवाद त सकियो तर अब के कसो गर्ने ? सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाएर लैजाने ? भन्नेबारे कुरा गर्न बाँकी छ ।'
कार्तिक ८, २०७७ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशसभा सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।
यसै सन्दर्भमा कर्णालीको विवाद साम्य भएको हो ? अध्यक्षद्वयका निर्देशनले अब कस्तो रुप लैजाला ? सत्ता जोगाउन भएको भनिएको सहमति कहिले कार्यान्वयन होला ? यी विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :
यो समस्या पार्टीभित्रको हो । दलभित्रको आन्तरिक कुरा हो । त्यसकारण दलभित्र छलफल गरेर नै समाधान गर्ने हो । १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले मविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यतिबेला पनि दलमा सल्लाह गरेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको होइन । अविश्वासको प्रस्ताव एउटा प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यसलाई प्रक्रियामा नै लगेर टुंग्याउनुपर्‍यो ।
अहिले संसदीय दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अहिलेको यो विवाद त सकियो तर अब के कसो गर्ने ? सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाएर लैजाने ? भन्नेबारे कुरा गर्न बाँकी छ । हामी यसबारे दलमा छलफल गर्छौं । त्यसपछि अगाडि बढ्छौं । अहिले देखिएका समस्याको समाधान गर्छौं ।
प्रक्रियाद्वारा विषय समाधान भइसकेपछि मान्दैनौं भनेर भन्ने कुरै भएन नि ! दलको नेता म हो । दलको नेताले बोलाइसकेपछि बैठकमा सबै सदस्यहरूले आउनुपर्छ । अनुशासनको कुरा पनि हो । नैतिक प्रश्न पनि हो । आउँदैनौं भनेर नआउन पनि सक्ने भए । ५ वा १० जना नआउँदैमा दलको बैठक त रोकिँदैन । बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेपछि त बैठक अगाडि बढ्छ । दलको बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था त छैन । कोरम पुग्नेबित्तिकै दलको बैठक अगाडि बढ्छ । त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयले कर्णालीको विवाद समाधानका लागि फरक-फरक निर्देशन दिनुभएछ । ती निर्देशनले झन् विवाद बढ्ला जस्तो देखियो नि ?
उहाँहरूको निर्देशनभन्दा पनि हामीले संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गरेका छौं । संविधान र कानुनलाई एक कुनामा राखेर काम गर्न सकिने कुरा भएन । सबैले आ-आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्‍यो । पार्टीले आवश्यक सल्लाह दिने/माग्ने हो, सूचना माग्ने हो र योजना बनाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने काम त सरकारको सरकारले गर्छ र संसदको संसदले गर्छ ।
पार्टीको जिम्मेवार नेताहरू भएकाले सल्लाह, सुझाव दिनसक्ने कुरा भयो तर तल ज-जसले जे-जे जिम्मेवारी पाएका छन् ती जिम्मेवार व्यक्तिहरूले व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्‍यो ।
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७७ १८:१३
काठमाडौँ — खगोल विज्ञानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा दुई नेपाली विद्यार्थीले अवार्ड पाएका छन् ।
यस वर्ष सञ्चालित 'ग्लोबल ई-कम्पिटिसन अन एस्ट्रोनोमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स'मा नेपालको तर्फबाट सहभागी १४ जनामध्ये दुईजना विद्यार्थीहरुले 'अनरेबल मेन्सन' अवार्ड हात पारेक‍ा हुन् ।
कोरोनाका कारण कोलोम्बियामा हुने भनिएको चौधौं 'इन्टरनेसनल ओलम्पियाड अन एस्ट्रोनोमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स्' यस वर्ष अनलाइन मार्फत प्रतियोगिता गराइएको थियो ।
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७७ १८:०१
‘चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमण अस्वाभाविक र आकस्मिक होइन’